မိန်းကလေးပီပီ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ နေချင်သော်လည်း စိတ်မရှည် မသိမ်မွှေ့တတ်သော ယူ တို့ရဲ့ ရှင်ရှင်လေးပါ အလှတရားတွေ ထုတ်ပြလိုက်ပြန်တဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်…. – Shwe Naung
မိန်းကလေးပီပီ ငြိမ်ငြိမ်သက်သက် သိမ်သိမ်မွေ့မွေ့ နေချင်သော်လည်း စိတ်မရှည် မသိမ်မွှေ့တတ်သော ယူ တို့ရဲ့ ရှင်ရှင်လေးပါ အလှတရားတွေ ထုတ်ပြလိုက်ပြန်တဲ့ ရှင်ယွန်းမြတ်….
N N | June 27, 2021 | Celebrity | No Comments
ချစ် ပရိသတ်ကြီးရေ အသားအရည် ဖြူဝင်းလှပပြီး ပုရိသတို့ စွဲမက်ဖွယ် အလှတရားတွေကို ပိုင်ဆိုင် ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ် ရှင်ယွန်းမြတ်ကို သိကြမယ် ထင်ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ် လောကကို ဝင်ရောက်တာ သိပ်မကြာ သေးပေမယ့်
ပရိသတ် အများအပြားရဲ့ တစ်ခဲနက် အားပေးမှုကို ရယူပိုင်ဆိုင် ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးမှုအများဆုံးရရှိ ထားတဲ့သူမကတော့ social media လောကမှာ နာမည် တစ်လုံးနဲ့ ရပ်တည် နေသူ တစ်ယောက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။
သွယ်လျတဲ့ ခန္ဓာကိုယ် နဲ့အတူ လှပ ကြည်လင်တဲ့ အသားအရည် ကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီး sexy ကျတဲ့ သူမရဲ့ အမိုက်စား ပုံတွေ နဲ့ ညို့အားပြင်းပြင်း ဆွဲဆောင်နိုင် သူလေးဖြစ်တာကြောင့်
လက်ရှိဖေ့ဘွတ် စာမျက်နှာမှာ ရေပန်းစား လူကြိုက် များကာ ပုရိသတွေ ဝန်းရံနေကြတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။လတ်တလော မှာတော့ အမိုက်စားပို့စ် တွေပေးကာ ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိ လှရက် လွန်းနေတဲ့ ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
ပုံလေး တွေတိုင်းမှာ ရှင်ယွန်း တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ ချစ်ဖို့ ကောင်းနေတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။မိန်းကလေးပီပီ ငြိမ်ငြိမ် သက်သက် သိမ်သိမ် မွေ့မွေ့ နေချင သော်လည်း စိတ်မရှည် မသိမ်မွှေ့ တတ်သော ယူ တို့ရဲ့ ရှင်ရှင်လေးပါ.
သူမကတော့ လတ်တလော လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာမှာ အမျိုးသားတွေရဲ့ ဝန်းရံခြင်းကို ခံနေရတာဖြစ်ပြီး လူကြိုက် များလာတဲ့ မော်ဒယ်အမိုက်စား လေးဖြစ်ပါတယ်။ကဲ…ချစ်ပရိသတ်တွေ အတွက် ရှင်ယွန်းမြတ်ရဲ့ ပုံလေးကို မျှဝေ ပေးလိုက်ပါတယ်။
အမိုက်စား ကိုယ်လုံးလေးနဲ့ အလန်းစား ဖက်ရှင်လေး ဝတ်ဆင်ကာ ဆက်ဆီကျကျ လှပနေတဲ့ မင်းသမီးချောလေး အိချောပိုရဲ့ အလှ ပုံရိပ်လေးများ………
တောင်ထိပ်ပေါ်ကအမိုက်စား လှပလွန်းတဲ့ သဘာဝ ရှုခင်းတွေ ကို နောက်ခံ ထားကာ အမိုက်စား ပုံလေး ဖြစ်နေတဲ့ အိန်ဂျယ်လမုန်……
ပက်ထရစ်ရှာရဲ့ အမိုက်စား ပုံရိပ်လေးများ…